राजनीति(Politics) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
नेप्सेले बिक्रीतर्फबाट पनि हटायो एओएन सुविधा, आइतबारबाट लागू हुने
काठमाण्डौमा ‘स्टडी इन इन्डिया एक्स्पो’ सुरु, ४० भन्दा बढी विश्वविद्यालयको सहभागिता
सत्ता गठबन्धनमा भाँडभैलो, माओवादीदेखि जसपासम्म फूटको संघारमा
काठमाण्डौ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार एकाएक अमेरिकासँग नजिकिएपछि सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरुको नेतृत्वलाई सरकार छाड्ने तीव्र दवाब सिर्जना भएको छ । देउवाले पछिल्लो समय एकाएक अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेपछि यसबाट चीनसँग नजिक देखिने कम्युनिष्टहरु झस्किएका छन् । चीन लगायतका छिमेकीहरुको देउवासँगको सहकार्य...
महानगरको चुनावी भिडन्त: ५ ठाउँमा गठबन्धनको अग्रता, एउटामा स्वतन्त्र अगाडि बढ्दा एमाले निल !
काठमाण्डौ । स्थानीय निर्वाचनको मतगणना जारी छ । सुरुवाती चरणमा रहेको मतगणनाको क्रममा कतिपय स्थानमा रोचक अवस्था पनि देखिएको छ । मुख्य रुपमा गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेस र एमालेबीच विभिन्न ठाउँमा कडा टक्कर देखिएको छ । विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाका मतपरिणामहरु सार्वजनिक भइरहँदा धेरैको ध्यान चाहिँ देशका ६ महानगरपालिकाको सम्भावित...
काठमाण्डौमा बालेनको अग्रता, उपमेयरमा सुनिता एक्लैको ४०% बढी मत
काठमाण्डौ । निर्वाचन कार्यालयले काठमाण्डौ महानगरपालिकाको दोश्रो मतपरिणाम औपचारिक घोषणा गरेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार काठमाण्डौका ५ वटा वडामा २ हजार २९० मत गणना भएको छ । जसमध्ये वडानम्बर ३२ मा ७०० मत गणना भएको छ भने वडानम्बर १ मा ७१०, ३ मा २००, २ मा ४८० र ४ नम्बर वडामा २०० मत गणना भइसकेको छ । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार...
इटहरीमा गठबन्धनका उम्मेद्वार एमालेभन्दा ३५५ मतले अगाडि
इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम प्राप्त भएको छ । पछिल्लो परिणामअनुसार सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार कांग्रेसका हेमकर्ण पौडेलले ९८० मतसहित अग्रता लिएका छन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय इटहरीले जनाए अनुसार पौडेललाई एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार यामकुमार सुब्बाले ६२५ मतले पछ्याइरहेका छन्...
गुल्मीको रेसुंङ्गा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमै कांग्रेस विजयी
काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसले गुल्मीको रेसुंङ्गा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर नै जितेको छ । मेयरमा खिलध्वज पन्थी ८ हजार ६१४ मतसहित र उपमेयरमा अमृतादेवी कुँवर ८ हजार ६१९ मतसहित विजयी भएका हुन् । मेयरमा निर्वाचित पन्थी कांग्रेस गुल्मीमा सभापति पनि हुन् । मेयरमा उम्मेद्वारी दिएका नेकपा एमालेका राजेन्द्र पाण्डेले ७ हजार ३२० मत...
इटहरी: मेयरमा कांग्रेसले अग्रता लिँदा उपमेयरमा एमाले अगाडि
इटहरी । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा मेयरमा गठबन्धनका उम्मेदवारले अग्रता लिँदा उपमेयरमा भने गठबन्धनका उम्मेद्वार पछाडि परेका छन् । मेयरतर्फ गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका हेमकर्ण पौडेल मतान्तर बढाउँदै अगाडि बढेका छन् भने उपमेयरमा भने गठबन्धनबाट नेकपा एसका उम्मेद्वार केशवकुमार बिष्ट पछाडि परेका छन् । इटहरीमा...
पोखरा महानगरपालिका : गठबन्धन र एमालेका उम्मेदवारबीच दुई मत फरक
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा २ सय मत गणना भएको छ । वडा नम्बर १ र १२ मा मतगणना गर्दा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले अग्रता लिएका छन् । आचार्यले ७६ मत प्राप्त गरेका छन् भने एमालेका कृष्ण थापाले ७४ मत प्राप्त गरे । उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी कोपिला रानाभाटले ८३ मत प्राप्त गरेकी छन् भने मन्जु गुरुङले ८१ मत प्राप्त गरेकी छन् । त्यसै गरी...
खसेको मतभन्दा बढी मतपत्र भेटिएपछि मतगणनामा विवाद
सप्तरी । सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाको मतदान स्थलमा विवाद भएको छ । वडा नं १२ मा खसेको मत भन्दा ४ वटा मत बढी भएपछि विवाद भएको हो । मतपेटिकाको शिल खोलेको अबस्थामा भेटिएको एक राजनीतिक प्रतिनिधिले जानकारी दिएका छन् । ...
देउवाको गृहपालिकाको अध्यक्ष\_उपाध्यक्षमै कांग्रेसको जित
डडेलधुरा । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहपालिका डडेलधुराको गन्यापधुरामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वा इन्द्रबहादुर कार्की गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । कार्की ३ हजार ३८४ मतसहित गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेस (वीपी)का...
भरतपुरमा रेणु दाहालले लिइन् ७० मतको अग्रता
चितवन । चितवनको भरतपुरमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मेयरको उम्मेद्वार रेणु दाहालले निकटतम प्रतिद्वन्दीलाई ७० मतले पछाडि पारेकी छिन् । भरतपुर महानगरपालिकाको ९५० मत गन्दा प्रचण्डपुत्री समेत रहेकी दाहालले ३७४ मत पाएकी हुन् । यसअघि उनलाई टक्कर दिइरहेका एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले ३०४ मत प्राप्त गरेका छन् । कांग्रेसबाट...
बालेन साहको अग्रता बढ्यो, एमालेका केशव स्थापितभन्दा २०२ मतले अगाडि
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन साहले सुरुवाती अग्रतालाई कायमै राखेका छन् । जारी मतगणनाको ताजा मतपरिणामअनुसार साहले ७४७ मतसहित अग्रता लिएका हुन् । उनलाई नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितले ५४५ मतसहित पछ्याइरहेका छन् । यस्तै, कांग्रेसबाट मेयर पदकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंह...
पोखरामा गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वारबीच कडा टक्कर
काठमाण्डौ । ढिलोगरी मतगणना सुरु भएको पोखरा महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार र एमालेका उम्मेद्वारबीच सुरुवातमा कडा टक्कर देखिएको छ । हालसम्म त्यहाँ ५० मत गनिएको छ । ५० मतमध्ये गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता धनराज आचार्यले २३ मत पाएका छन् । एमालेबाट मेयरका उम्मेद्वार कृष्ण थापाले २२ मत...
धरानमा कांग्रेस र स्वतन्त्र उम्मेद्वारबीच टक्कर, एमाले तेश्रो स्थानमा
धरान । एमालेको लालकिल्ला भनिने सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको ताजा मतपरिणामअनुसार गठबन्धनको समर्थनमा कांग्रेसबाट मेयरका उम्मेद्वार किशोर राईले एमाले उम्मेद्वारभन्दा झण्डै दोब्बर मतले अग्रता बनाएका छन् । धरान उपमहानगरपालिकामा १२०० मत गनिसक्दा कांग्रेसका उम्मेद्वार राईले ४५१ मतसहित अग्रता लिएका हुन् । उनलाई स्वतन्त्रबाट...
वीरगञ्जमा गठबन्धनका उम्मेद्वारको सुरुवाती अग्रता
वीरगञ्ज । यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा तराईमा चासोका साथ हेरिएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का उम्मेद्वारले सुरुवाती अग्रता लिएका छन् । सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार राजेशमान सिंहले सुरुवाती अग्रता लिएका हुन् । उनले ७९ मतसहित अग्रता बनाएका हुन् । एमालेका मेयरका उम्मेद्वार...
भक्तपुरमा नेमकिपाको शानदार अग्रता
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकामा यसअघिका निर्वाचनमा जस्तै यो पटक पनि नेपाल मजदूर किसान पार्टी(नेमकिपा)ले फराकिलो मतान्तरले अग्रता लिएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाको मेयर पदमा नेमकिपाले २९११ मतसहित अग्रता लिएको हो । भक्तपुरमा कांग्रेसका उम्मेद्वारले ३८८, एमालेले २९८ मत ल्याएका छन् । यसरी हेर्दा कांग्रेस र एमालेका उम्मेद्वारको मत जोड्दा...
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा विद्यालयमा खानेपानी व्यवस्थापन
बोलिंगरको मध्यब्यान्डमा भोलुमसहितको ब्रेक-अप, सुपर ट्रेन्डमा पनि बन्यो बुलिसक्रस
निफ्राले रु. ५ अर्ब र नेपाल बैंकले रु. २.५ अर्बको ऋणपत्र जारी गर्ने, सेबोनसँग मागे अनुमति
डोल्पाको दुनैमा नयाँ शाखा खोलेसँगै ७७ वटै जिल्ला पुग्ने निजी क्षेत्रको पहिलो बैंक बन्यो ग्लोबल आइएमई
फेरि बढ्न थाल्यो कोभिड संक्रमण, ५५ जनामा पुष्टि
कुमारी जबको ‘प्रोफेसनल एचआर ट्रेनिङ’ सम्पन्न
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र काठमाण्डौ प्याथ ल्याबबीच छुट सम्झौता
बीओके क्यापिटलको सीईओमा अनीलरत्न तुलाधार नियुक्त
गरिमा विकास बैंकद्वारा ट्राफिक प्रहरी वृत्तलाई जनचेतनामूलक सामग्री हस्तान्तरण
नेप्सेमा उछाल, बजार फर्किएकै हो ? यसो भन्छन् जानकार
हकप्रद र बोनसका बारेमा सेबोनले मागेको स्पष्टीकरणमा एलआईसी नेपालले के दियो जबाफ ?